Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 12, 2021 - Independent Oromia
Kurfii RSWO · Kibxata Onkoloolessa 12, 2021
Duulli duguuggaa sanyii, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Kiiramuu, Magaalaa Haroo keessatti, humna ‘Faannoo’ jedhamu, kan hidhannoo guutuun Naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti seensifamee fi saba Amaaraa kanneen bakkas jiraataniin, Uummata Oromoo irratti raawwatamu bifa haarayaan banamee jiraachuu.
Duula Dilbata Onkoloolessa 10, 2021 banamee, hanga Kibxata har’aatti walitti fufiinsaan deemaa jiruunis, maatii Oromoo tokko irraa qofa namoonni 17 (kudha-torba) haala suukanneessaan ajjeefamuu.
Dabalataanis, Oromoonni humna kanaan butamanii achi-buuteen isaanii hin beekamin jiru danuun jiraachuu.
Dargaggoonni Oromoo 5 ajjeefamuu; isaan keessaas 2 fan'ifamuu
Ajjeechaan qabata deggersa WBOtiin, Uummata Oromoo irratti, keessattuu, dargaggoota Oromoo irratti fuuleeffachuun, LMKIIn raawwatamu, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii keessatti tibbana akka-malee hammaatee jiraachuu.
Haaluma kanaan, Dargaggoonni Oromoo, umuriin isaanii ganna 23 hin caalle shan guyyoota sadan kana haala suukanneessaan ajjeefamuu. Dargaggoota ajjeefaman kanneen keessaas, dargaggoonni lama Magaalaa Ganjii keessatti haadaan fan'ifamuun Hawaasni Oromoo Magaalaa Ganjii ba'ee akka daawwatu taasifamuu.
Sagantaa (Kurfii) RSWO Kibxata Onkoloolessa 12, 2021
Haati daa’ima ishee baatii saddeetii waliin hidhamuun dararamaa jiraachuu
Lola duguuggaa sanyii Uummata Oromoo irratti kallattii adda addaan banamee jiru
Duula duguuggaa sanyii Uummata Oromoo irratti kallattii adda addaan deemaa jiru
Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 12, 2021